Desogestrel ပါအမှုန့် (54024-22-5) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / Desogestrel ပါအမှုန့် (54024-22-5)
SKU: 54024-22-5. အမျိုးအစား: အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, Desogestrel ပါမှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (54024-22-5) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Desogestrel ပါအမှုန့် တစ်ခါတစ်ရံ norethisterone နှင့်အတူ progestin.Alonga"ကိုတတိယမျိုးဆက်" အဖြစ်ရည်ညွှန်း 1972.Desogestrel အတွက် United States မှာရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်ကသာ progestins တစ်ခုဖြစ်သည် 1981 ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ 1992.It အတွက်ဥရောပမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ကလေးမွေးဖွား control.Desogestrel များအတွက် progestogen-only "mini ကိုဆေးလုံး" ဟုအဆိုပါ world.It တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ကျယ်ပြန့်ရရှိနိုင်မယ့်ယေဘုယျဆေးဝါးအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Desogestrel ပါအမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
ဓာတုအမည်များ: Desogestel အမှုန့်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Cerazette, Mircette, Desogestrel ပါအမှုန့်, Cerazette အမှုန့်, Mircette powdrr, 54024-22-5
Desogestrel ပါအမှုန့် (Cerazette) ကိုလည်း '' mini ကိုဆေးလုံး '' အဖြစ်လူသိများသောတစ်ဦးပါးစပ်တားဆေးတက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကာလ၏ပထမနေ့၌ယူသည့်အခါ Cerazette, ကိုယ်ဝန်ဆန့်ကျင်လက်ငင်းကာကွယ်မှုပေးသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတည်းသာတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း, အတု progestogen ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာစံပေါင်းစပ်တားဆေးဆေးလုံးကနေမတူညီတဲ့ပါပဲ။
အများဆုံးအနိမ့်ထိုးပါးစပ် contraceptives ကဲ့သို့ပင် Cerazette ကာကွယ်မှုတစ်ခုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ  အတွက်ထိရောက်သောထက်ပို 1% ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအစမသက်မသာနဲ့နာကျင်ကာလ၏ဖြစ်ပျက်မှုလျှော့ချအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်သက်သေပြနေသည်။ သာ contraceptives အများဆုံးကိုအခြား progestogen မတူဘဲ, သင်နောက်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ထက် 12 နာရီဖို့သင့်ဆေးလုံးကိုတက်ယူနိုင်သောကြောင့်ဒီပါးစပ်တားဆေးယူခြင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတူသင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး
Desogestrel ပါအမှုန့် (CAS 54024-22-5) ကိုအောင်မြင်စွာယူတဲ့အခါမှာအကြိုးခံစားခှငျ့၏နံပါတ်, အတူလာပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
သင်သည်သင်၏ကာလ၏ပထမနေ့၌ယူလျှင် mini ကိုမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဆေးလုံးချက်ချင်းဓတေားအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး -This
ကသာ progestogen ပါရှိသည်ဟူ.လည်း, ကသငျသညျမတတျနိုငျပါလျှင်သုံးစွဲဖို့သင့်လျော်မယ့်, ဒါမှမဟုတ်, အီစရိုဂျင်နဲ့ပါးစပ်တားဆေးကိုမသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်
သငျသညျနို့အခါကဒီ Mini ကိုမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဆေးလုံးထဲမှာအီစရိုဂျင်၏ရတာဟာမရှိခြင်းကြောင့်ဘေးကင်းသုံးစွဲဖို့စေသည်
တားဆေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Degestrel (Cerazette) ကို အသုံးပြု. -Women သူတို့ရဲ့ကာလပုံမှန်ထက်လျော့နည်းနာကျင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိစေခြင်းငှါ
dual-ပါးစပ် contraceptives တစ်ကန့်သတ်သော -Degesogestrel (Cerazette) နို့တိုက်နေသောအမျိုးသမီးကိုယူနှင့် 35 နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ကျော်နေသောသူတို့ကိုအားဖြင့်ရနိုင်
dysmenorrhea (ပြင်းထန်စွာနာကျင်ကာလ) မှခံစားနေရပြီးအမျိုးသမီးများ၏% သိသိသာသာတိုးတက်မှုကြုံတွေ့ 94 လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေပေးဆက်ကြသူများ
အဆိုပါ Desogestrel ပါအမှုန့် (Cerazette အမှုန့်) သင်၏ဆရာဝန်အကြံပြုထိုး (မဆိုသို့မဟုတ်လျှောက်ထားသောသူအပေါင်းတို့ကိုသုံးပါ) အောက်ပါအပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မည်:
Desogestrel ပါအမှုန့်-ethinyl Estradiol 0.15 Mg-0.03 Mg ခံတွင်း Tablet ကို
Desogestrel ပါအမှုန့်-ethinyl Estradiol Biphasic ခံတွင်း Tablet ကို
Desogestrel ပါအမှုန့်-ethinyl Estradiol Triphasic ခံတွင်း Tablet ကို
28 ရက်သတ္တပတ်ထောက်ပံ့ရေး - Desogestrel ပါအမှုန့် (Cerazette) ၏တစ်ဦးချင်းစီချွတ်4တက်ဘလက်များပါရှိသည်။
အကြောင်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာနေ့တိုင်းသင့်ရဲ့တက်ဘလက်ကိုယူပါ။ ရေနှင့်တကွ, တက်ဘလက်တပြင်လုံးကိုမျိုချ။
မြှားကျောက်ပြားများအကြား, အချွတ်၏မျက်နှာစာပေါ်ပုံနှိပ်နေကြသည်။ ထိုရက်သတ္တပတ်၏အဆိုပါရက်ချွတ်၏နောက်ကျောအပေါ်ပုံနှိပ်နေကြသည်။ နေ့တိုင်းတဦးတည်းတက်ဘလက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ။
သငျသညျ Desogestrel ပါအမှုန့် (Cerazette) ၏အသစ်တခုချွတ် start အခါတိုင်း, ထိပ်တန်းကနေ tablet ကိုယူပါ။ ပဲမဆိုတက်ဘလက်နှင့်အတူမစတင်ပါနဲ့။ သင်တစ်ဦးဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပေါ် start လျှင်ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် Wed နှင့်အတူ (နောက်ကျောတွင်) မှတ်သားထိပ်တန်းကနေ tablet ကိုယူရမည်ဖြစ်သည်။
အထုပ်အချည်းနှီးသောသည်အထိအမြဲတမ်းမြှားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြညွှန်ကြားမှုကိုအောက်ပါနေ့တိုင်းတဦးတည်းတက်ဘလက်ယူ Continue ။ သငျသညျပြီးသားတစ်ဦးအထူးသဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ပေါ်တွင်သင်၏တက်ဘလက်ယူကြပြီဆိုပါကသင့်ရဲ့ဗူး၏နောက်ကျောကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သင်, Desogestrel ပါအမှုန့် (Cerazette) ၏အသုံးပြုမှုကိုကာလအတွင်းအချို့သောအင်္ဂါဇာတ်သွေးထွက်ရှိစေခြင်းငှါ (ပုဒ်မ4ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုကိုကြည့်ပါ) သင်မူကားသာမန်အဖြစ်သင့်တက်ဘလက်ယူကိုဆက်လက်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးချွတ်ဗလာဖြစ်တဲ့အခါ, သငျသညျနက်ဖြန်နေ့၌ Desogestrel ပါအမှုန့် (Cerazette) ၏အသစ်တခုချွတ်နှင့်အတူစတင်ရပါမည် - ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်တစ်ဦးသွေးထွက်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစရာမလိုဘဲ။
ဘယ်လို Desogestrel ပါမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
အဆိုပါချို့ယွင်းခြင်းနှင့် estrogen receptor မှချည်နှောင်။ ပစ်မှတ်ဆဲလ်အမျိုးသမီးမျိုးပွားကျေးရွာအုပ်စု, အ mammary gland, အ hypothalamus, နှင့် pituitary ပါဝင်သည်။ ပြီးတာနဲ့အဲဒီ receptor မှခညျြနှောငျ Desogestrel ပါမှုန့်ကဲ့သို့အ progestins အဆိုပါ hypothalamus ကနေဖြန့်ချိဟော်မုန်း (GnRH) gonadotropin ၏လွှတ်ပေးရန်၏ကြိမ်နှုန်းနှေးကွေးခြင်းနှင့် Pre-ovulatory LH (luteinizing ဟော်မုန်း) မြင့်တက်တုံးပါလိမ့်မယ်။
Desogestrel ပါအမှုန့်အဓိက Ovary (မျိုးဥထွက်) မှကြက်ဥအကာလွှတ်ပေးရန်တားဆီးကတားဆေးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကပိုပြီးခက်ခဲသုက်ပိုးအမိဝမ်းထဲသို့လိင်အင်္ဂါကနေဖြတ်ကူးရန်အဘို့အအောင်, အမိဝမ်း၏လည်ပင်းမှာသဘာဝအချွဲ၏အထူတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ အမိဝမ်းထဲသို့ဝင်ခြင်းသုက်ပိုးကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့်, ဖြန့်ချိလျက်ရှိသောမည်သည့်ကြက်ဥအောင်မြင်သော fertilization လျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။
Desogestrel ပါအမှုန့် (Mircette powdrr) ကိုလည်းအမိဝမ်းနံရံ (endometrium) ၏အရည်အသွေးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤသည်အားဖြင့်ကိုယ်ဝန်တားဆီး, အမိဝမ်းမြို့ရိုးပေါ်သို့မဆိုဓာတ်မြေသြဇာကြက်ဥ၏အောင်မြင်သော implantation ကာကွယ်ပေးသည်။
အဆိုပါ FDA ကကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အသုံးပြုရန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆေးဝါးများ categorizes ။ ငါးအမျိုးအစား - A, B, C, D, နဲ့ X ကိုတစ်ဦးဆေးကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ခေါ်ဆောင်သွားသောအခါတစ်ဦးမွေးသေးသောကလေးဖို့ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်များကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုကြသည်။
Desogestrel ပါမှုန့်အမျိုးအစား X သို့ကျရောက်:
ဒါဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုယူပြီးအမျိုးသမီးတွေပြဿနာများနှင့်အတူကလေးရှိစေခြင်းငှါပြသလျက်ရှိသည်။ မိခင်များအတွက်ဆေးဝါး၏အကျိုးကျေးဇူးများကလေးမှဘေးအန္တရာယ်များထင်ရှားသောဘယ်မှာမျှအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ဤရွေ့ကားဆေးဝါးများကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောခြင်းကိုဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
Desogestrel ပါအမှုန့် (CAS 54024-22-5)
Desogestrel ပါအမှုန့် (Cerazette) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အနည်းငယ်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်သောဆေးညွှန်းတားဆေးကုသမှုဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ Cerazette အလွန်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောသင်တန်းသားများနှင့်အချို့သောအသေးစားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကသည်းခံခဲ့သည်:
ခံစားချက်အပြောင်းအလဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို (လိင်စိတ်) ယုတ်လျော့, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပျို့, ဝက်ခြံ, ရင်သားနာကျင်မှု, မမှန်ကာလနှင့်အလေးချိန်အမြတ်
လေ့လာရေးကဤတဆယ်အမျိုးသမီးတွေထက်လျော့နည်းတဦးတည်းအထဲကအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြသပါ။ ခန္ဓာကိုယ် mini ကိုဆေးလုံးမှနေသားတကျဖြစ်လာကဲ့သို့ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနိမ်သင့်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဖြစ်ပျက်များနှင့်ဆက်လက်ရှိကြပါလျှင်, သင်သည်သင်၏အခွအေနေဆှေးနှေးဖို့ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
AASraw ထံမှ Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Nomegestrol Acetate အမှုန့်